China akwụkwọ ịwụ rụpụta na Factory | JAHOO
Nkọwapụta ngwaahịa Nkebi Akụ Dimension Ihe ngwugwu Ileba Anya na (cm) Popcorn & Fried Chicken Akwụkwọ Bucket 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （mkpụmkpụ & abụba） 16.7 * 13 13 13 ...
Sizedị Nha na (cm)
Akwado & Eghe Chicken Akwụkwọ ịwụ
64oz （mkpụmkpụ & abụba）
64oz （ogologo & mkpa）
350 + otu Pee
Eghe eghe igbe. Disposable akwụkwọ ịwụ. Maka ibughari ma jee ozi oku e ghere eghe na ihe oriri ndi ozo. Mesoo akwụkwọ maka iguzogide griiz penetration na-eri eri.
Mee ka ọ bụrụ nri nchekwa ma ọ bụ nri ọhụrụ, mgbe ịchọrọ ịre ma ọ bụ bufee nri ma ọ bụ kwuo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ọrụ nnyefe ụlọ maka nri mgbe ahụ akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ nwere ike ịbịaru ezigbo aka.
Akwụkwọ e ji eme ihe bụ ihe kacha mma maka ịzụ ahịa na ngwaahịa ndị ahịa na ahịa.
Site na teknụzụ anyị kachasị ọhụrụ, nkwakọ ngwaahịa abụrụla isi ihe na-echekwa ma na-ere ngwaahịa ndị na-eri nri n'ahịa na-arụ ọrụ mgbe niile. Otu n'ime ihe ndị dị mkpa iburu n'uche mgbe ị na-ere ihe dị nro dị ka nri bụ iji hụ na ịdị mma ya na-adịgide adịgide na ngwugwu akwụkwọ nri na-enyere aka.
A na-achọkarị ụdị nkwakọ ngwaahịa a na ụlọ ọrụ nri.
Ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ dabere na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa iji nye ngwugwu kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa ha.
Kedu ọrụ na-eme Jahoo mkpọ inye?
1.Samples na-enye n'efu maka akwụkwọ ngwaahịa anyị.
2.Lead oge ngwa ngwa, 10000 square mita factory, 50 mmepụta igwe iji jide n'aka gị iji nnyefe ngwa ngwa.
3.We nwere ogologo oge nkwado na ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na mbupụ mbupụ anyị buru ibu. Companieslọ ọrụ ụgbọ mmiri ahụ nwere ike ịnye anyị ezigbo ego.
4.Okachamara ọkachamara na-akwado. Anyị nwere ezigbo ndị ọrụ ahịa mgbe erechara. Ha nwere ike idozi nsogbu gị n’oge.
5.A ga-enyocha ngwongwo niile wee nwalee ya tupu mbupu ya.
6.O juru afọ ndị ahịa dị anyị mkpa .Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara azụmahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị site na Trademanager ma ọ bụ Email. A ga-aza ya n'ime awa 24.
Nke gara aga: akpa akwụkwọ
Popular eghe chicken akwụkwọ ịwụ ngwa ngwa cu ...